EU oo la dagallaamaysa kuwa dadka tahriibiya - BBC Somali
EU oo la dagallaamaysa kuwa dadka tahriibiya
19 Maajo 2015
Image caption Muhaajiriin doonaya in ay gaaraan Yurub oo Liibiya lagu hayo
Wasiirrada difaaca iyo arrimaha dibedda ee Midowga Yurub ayaa ansixiyay qorshayaal lagu sameynayo ciidan badeed la dagaallama qolyaha dadka tahriibiya ee jooga Liibiya.
Haweeneyda Midowga Yurub u ah madaxa siyasadda, Federica Mogherini, ayaa sheegtay in howlgalka uu isku dayi doono inuu kala dhantaalo, qaabka ganacsiga ee shabakadaha dadka sida sharci darrada ah uga gudbiya badda Mediterranean-ka.
Midowga Yurub ayaa ku talla jira in howlgalka ciidan uu bilowdo bisha soo socota, iyadoo xaruntiisu noqon doonto caasimada Roma ee dalka Talyaaniga.
Ciidammada badda ee Midowga Yurub uu diyaarinayo ayaa waxaa hoggaamin doona Adm Enrico Credendino, oo u dhashay dalka Talyaaniga ahaana taliyihii howlgalka Midowga Yurub ee la dagaallanka burcad baddeeda Soomaaliya.
Midowga Yurub ayaa xakameyn la' muhaajiriin sharci darro ah, oo uga imanaya qaaradaha Afrika iyo Aasiya, iyaga oo si ay Yurub usoo gaaraan soo mara badda Mediterranean-ka.
Dalka UK ayaa dowr muhiim ah ka qaadanaya sidii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu u meel marin lahaa, qaraar Midowga Yurub u oggolaanaya in uu cudud miletari u adeegsado kuwa dadka soo tahriibiya.
Balse safiirka Liibiya u fadhiya Qaramada Midoobay, Ibrahim Dabbashi, ayaa sheegay in dowladdiisa aanan laga tashan howlgalka la doonayo in dhulkeeda laga fuliyo.
Waxa uu intaa ku daray in qorshaha Midowga Yurub ee ah burburinta doomaha kuwa wax tahriibiya ay ka dhalan karto khasaare ku yimaada dadka rayidka ah.
In ka badan 1,800 oo muhaajiriin ah ayaa sanadkan 2015-ka ku dhimatay badda Mediterranean-ka.